(Emelitere ikpeazụ On: 28/05/2021)
Ndị a ụgbọ oloko na-adịghị dị ka ugboro ugboro dị ka onye ga na-atụ anya nyere obere anya n'etiti ebe. Ha na-emekarị na-agba ọsọ ozugbo ọ bụla hour, ma nke a nwere ike ịdị iche iche site n'oge ruo n'oge. Otú ọ dị, ọ kachasị mma ịrịọ ozi njem ndi ozo mgbe ịzụta gị tiketi. Ke adianade ịmara oge na njem oge nke a ụgbọ okporo ụzọ, ọ dị oké mkpa iji emere ebere gị tiketi. E nwere nkwado igwe na ụgbọ okporo ígwè nyiwe na i nwere ike iji. All ị ga-eme na-slide warara njedebe nke tiketi n'ime oghere nke obere odo igwe na-eche ịnụ stampụ.
Riomaggiore ga-ma na-akpa na-akwụsị (ma ọ bụrụ na ị na-aga site na La Spezia) ma ọ bụ nke ise stop (ma ọ bụrụ na ị na-aga site Levanto). Otú ọ dị, ọ na-yikarịrị na-aga na-akpa na-akwụsị maka ọtụtụ Cinque Terre ọbịa, ebe ọ bụ ihe ndị kasị ụzọ na-e. Riomaggiore bụ nnukwu nke ise na obodo ntà, na na ọ bụ unofficial isi obodo ebe isi park ụlọ ọrụ bụ e. The ụlọ na-n'elu ugwu niile n'elu nkpoda ndagwurugwu, n'ụzọ nile obere ọdụ ụgbọ mmiri. The idaha ekpepụsị pastel ụlọ bụ ọmarịcha na ga-ebi na ebe nchekwa gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ a mma ịhụ mgbe anyanwụ dara, ọ bụkwa ihe a ga-ahụ anya di na nwunye na-achọ ịkọrọ oge pụrụ iche.
Nke ọ bụla n'ime obodo ise ahụ nwere otu amara. Corniglia bụ pụrụ iche ebe ọ bụ na-na waterfront. Otú ọ dị, ihe ọ kọrọ na osimiri, ya karịa eme ka elu maka na ya pụrụ iche mara mma. Corniglia nwere mmetụta dịpụrụ adịpụ karịa anya obodo ozo. Otú ọ dị, ọ na-enye a ọzọ kwuziri, obodo ikuku. Obodo a na-eleghara anya maka ya agwụ ike ụzọ ụkwụ. N'adịghị ka ndị ọzọ na obodo nta na ike ga-ruru site ụgbọ mmiri, Corniglia nọ na n’elu ugwu nta nile ma enweghi oke osimiri. Nanị ụzọ iru ọ bụ soro bulie onu na Cinque Terre ụzọ ma ọ bụ na na-ụgbọ okporo. Otú ọ dị, ọ dị oké mkpa iburu n'obi na ụgbọ okporo ígwè agaghị zọọ unu ọ bụla anụ ahụ mgbalị. Ọ ga-adị gị mkpa ịga ije na steepụ iji ruo n'etiti obodo ma hụ ihe niile obodo nta na-enye.
Vernazza a na-ewere dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mma obodo nta dị bụghị naanị Cinque Terre, ma mba ahụ dum nke Italy. Ọ bụ n'ezie ndị okpu ọla nke Cinque Terre na-eme ka ọtụtụ ọdịda na ịhụnanya na njem. Ọ nwere a ọzọ mara na omenala obi na-adị na n'obodo ndị ọzọ na-enweghị. Ikpokọta na na ahụkebe nri na ebube ebube, na ị na-a ebe emesi a abụọ nleta. Jide n'aka na ileta Doria nnukwu ụlọ mgbe na Vernazza. O nwere otu nke ikpeazụ mbụ elu na-echebe ndị obodo iri afọ gara aga.
Monterosso al Mare bụ doro anya na ọtụtụ touristy na eme-dị ka obodo dị na Cinque Terre. Ọ nwere ụgbọala, hotels, na obere okwute ndị zuru oke maka ndị njem nleta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ileta a dị ịtụnanya akụkụ nke Italy, ma na-ahọrọ karịa oge a vibe, mgbe Monterosso bụ maka gị. Monterosso nwere a na-eme mkpagharị na bụ zuru okè n'ihi na mgbede okoro nọ na-, na ọbụna mma, ha nwere ezi iri ga-eme ka onye ọ bụla na-enwe Erimeri.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Ndenye Guide: Olee otú Iji Travel Cinque Terre Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-cinque-terre-train%2F%3Flang%3Dig – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)